KS-9005 Heerka CE FFP2 NR
KS-9008 Heerka CE FFP2 N ...
Goobta Asalka:Jiangsu, Shiinaha
Magaca alaabta:FFP2 Qaybaha isku laablaabida Sifeynta Maaskaro badhkeed
Shaqaynta:ka hortag hargabka / anti somke / boorka
Shahaadada:ISO / SGS / CNAS / CE
CayimanIyadoo aan lahayn Qiiqa Qiiqa
Xirxirida:1pc / bac caag ah, 25 kumbiyuutarro / sanduuq, 40 sanduuq / ctn ama sida macaamiisha ugu baahan yihiin
Faahfaahinta Baakadaha:25 kumbiyuutarro / sanduuq, 1000 kumbiyuutar / kartoon
KS-9008 Heerka CE FFP2 NR (Qalabka Qiiqa Hawada)
CayimanIyada oo Qalabka Neefsashada
Xirxirida:1pc / bac caag ah, 20 kumbiyuutarro / sanduuq, 40 sanduuq / ctn ama sida macaamiisha ugu baahan yihiin
Faahfaahinta Baakadaha:20 kumbiyuutarro / sanduuq, 800 kumbiyuutarro / kartoon
1. Qaab dhismeed aad u qurux badan iyo ilaalin waxyaabo lakabyo badan leh, kuwaas oo kala saari kara qaybaha si hufan una kicin kara ur gaar ah, siigada, bakteeriyada iyo fayrasyada.
2. Kala-shaandhaynta lakabyo badan, lakab maqaar-saaxiibtinimo leh oo la heli karo, dhar dibedda aan tolmo lahayn, lakabka meltblown, iyo lakabka shaandhada.
3.3D goynta saddex-geesoodka ah ayaa hagaajin kara ku-habboonaanta wejiga, hagaajinaysa saameynta ilaalinta, isku-xoqista aan tooska ahayn, xiritaanka xarkaha ultrasonic-ka ee aan walxaha lahayn, alxanka wanaagsan, xargaha laastikada sare, naqshadeynta jirka ee ballaaran ma yeeleyso maqaarka, waqti dheer maahan dhagan, oo gashan raaxo badan.
4. Dhexdhexaadiyaha xaraashka elektaroolka wuxuu xayeysiin karaa sheyga, iyo lakabyo badan oo lakabka shaandhaynta hufan leh lakabka ayaa ilaaliya caafimaadka neefsashada.
KN95 GB2626-2006, GB2626-2019 (Iyada oo Qalabka Neefsashada)
Wax ku ool sare leh oo ka dhan ah aerosols walxaha aan saliida lahayn. Qalabka neefsashadu wuxuu ka caawiyaa kahortagga qaarkood
walxaha wasakhda ah laakiin ma baabi'inayaan soo-gaadhista ama halista cudur qaadista ama
caabuq Si xun u isticmaaliddu waxay sababi kartaa jirro ama dhimasho.
Wajiyadan Shaandhaynta Wax ku oolka ahi waa:
Awoodda Hypoallergenic / Filtration Sare
Ka qaad walxaha la hakiyay
Ilaalinta Boodhka Dhirta
KN95 GB2626-2006, GB2626-2019 (Madaxa-Fuulay)
· Magaca Magaca: KN95 Qalabka Naas-nuujinta La-tuuro
· Summad: YIRENTANG
· Qaabka Xirashada: Xijaabka madaxa
· Midab: Caddaan
· Waxyaabaha: Polyester, Meltblown Static Electric
· Vilverar leh: AADAN AMA AAN LAHAYN
· Heerka: GB2626-2006, GB2626-2019
3 Maaskarada difaaca ee la tuuro
Maaskadan aan caafimaadka ilaalinayn waxay ka caawisaa kala saarida ugu yaraan 95% fayraska iyo infekshannada. Naqshad gaar ah oo 3-da ah oo aan tolmo wanaagsan lahayn naqshadeynta ayaa siineysa difaac ka dhan ah boodhka iyo PM 2.5, qiiqa baabuurta, manka, bateriga, qulqulka, iwm. Jilicsan, raaxo leh, ur lahayn, oo ku habboon maqaarka xasaasiga ah, miisaanka fudud, oo sahlan in lagu neefsado. Nooca Maaskaro Badbaadinta La-Iska-Tuuri Karo ee Aan Caafimaadka Ahayn: Maska La-tuuri Karo Qaabka: 3-daaqad loox dhegaha Midabka: buluug / casaan / caddaan Shahaadada: Shahaadada CE Waxyaabaha: Maskaxdan 3-da daaweyn ee aan caafimaadka ahayn waxay ka caawisaa kala-saaridda ugu yaraan 95% fayraska iyo infekshannada Waxyaabaha la neefsan karo, taas oo ka dhigaysa mid waxtar leh oo mooddo leh. Naqshadeynta gaarka ah ee 3 dharka aan tolmo wanaagsan lahayn waxay bixisaa difaac ka dhan ah boodhka iyo PM 2.5, qiiqa baabuurta, manka, fayraska, bakteeriyada, qulqulka, iwm. Oo laga sameeyay waxyaabo deegaanka u fiican, qoyaan-caddeyn, aan sun ahayn, aan xanaaq lahayn, jilicsan oo raaxo leh. Waxay kufiican tahay caafimaadka, saloolka ciddiyaha ama meelaha kale ee looga baahan yahay badbaadin, sida isbitaalka, diyaaradda, iwm. 3-da maaskarada qalliinka ee aan-tolmo lahayn oo qallalan ayaa laga sameeyay 3 shey oo aan-tolmo lahayn leh, waa caafimaad iyo badbaado adiga isticmaal. Naqshad dhammaystiran, markaad xirato, waxay si habsami leh ugu habboon tahay wejigaaga. Wareegga dhegaha ee laastikada way fududahay in la xidho mana culays dhegaha. Saddex lakab oo sifeeya boodhka, gaasaska sunta ah ee hawada ku jira, iyo marada shaandhaynta maqaarka u roon, oo ku siinaya ilaalin badan, ayaa kaa ilaalinaysa boodhka, xasaasiyadda iyo sunta.
Maaskaro wajiga KS-9005
1.Direct soo saaraha si loo damaanad qaado qiimo macquul ah iyo tayo aad u fiican
2.5 nashqadeeyaha naqshadeynta si guul leh looga hortago boodhka iyo bakteeriyada
3.Packing 25pcs / box, 1000pcs / kartoon, iyo sidoo kale waxay noqon kartaa halkii macaamiisha '
4.Sertiates ISO / CE / SGS / CNAS iwm shahaadooyinka qaraabada ah & warbixinnada imtixaanka.
5. sidoo kale waxaan leenahay qaabab kale oo badan, sida qaabka waalka, qaababka kaarboon firfircoon, qaababka dhegaha dhegaha la hagaajin karo iyo wixii la mid ah…
Maaskaro wajiga KS-9008
3.Packing 20pcs / box, 800pcs / kartoon, iyo sidoo kale waxay noqon kartaa halkii macaamiisha looga baahan yahay
5. sidoo kale waxaan leenahay qaabab kale oo badan, sida qaab la'aan, qaababka kaarboon firfircoon, qaababka dhegaha dhegaha la hagaajin karo iyo wixii la mid ah…
GB2626-2006, GB2626-2019 KN95 oo leh waalka
Magaca Badeecadda: maaskaro ilaaliya saddexda muraayadood ee loo yaqaan 'PM2.5'
Faahfaahinta alaabta: 10.5 × 16cm
Waxyaabaha ay ka kooban tahay: dhalaalka korontada ee dhalaalaya korantada + dhar tayo sare leh oo aan tolmo wanaagsan lahayn, sanka oo la gooyo ayaa lagu dhisi karaa, banaanka, waalka neefsashada, suunka dhegaha oo raaxo leh
Qaabka farshaxanka: naqshadeynta ergonomiga, daboolka kuleylka xiinka
Qurxinta Joogtada ah: caddaan, waa la habeyn karaa
Hawlaha ugu muhiimsan: ka hortagga boodhka, qulqulka, PM2.5, manka
GB2626-2006, GB2626-2019 KN95 MADAXA-DHIGAN
1. Ku soo jiid laastikada dusha sare madaxa, xagga sare ee madaxa.
Wajiga maaskaro saar wajiga, sanka ka xir sanka xajinaya,
Maaskarka hoose ayaa daboolaya garka.
3.Lacas ka hooseeya madaxa qoorta hoostooda dhegaha.
4.U adeegso labada gacmood si aad ugu hagaajiso qaabka sanka gooyo, adigoo hubinaya shaabadaysan.
5.U isticmaal gacmaha si aad u daboosho maaskaro ka dibna neefso; dareento dheecaan ka soo baxa sanka,
adke sanka. Haddii aad dareento daadinta hawo geesaha, fadlan hagaaji laastikada.
Mar labaad, hubinta shaabadaysan.